Netflix ရဲ့ K drama အသစ်ဖြစ်တဲ့ “Squid Game” ဟာ ကြည့်ရှူနှုန်းအရမ်းများနေသလို social media မှာလည်း squid game နဲ့ ပက်သက်တဲ့အကြောင်းတွေချည်းပါဘဲ။ Kpop ပရိသတ်တွေကတော့ သူတို့ရဲ့ idol တွေကို Squid game ထဲက ဇာတ်ကောင်တွေအတိုင်း edit လုပ်ပြီး စ နေကြတဲ့သူတွေရှိသလို Squid Game ကိုသာ idol တွေ ဝင်ကစားကြရင် ဘယ်လိုဖြစ်လာမလည်းဆိုပြီး ဆွေးနွေးနေကြတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။
“Squid game” ထဲက လုံးဝမလှုပ်ဘဲနေမှ နိုင်နိုင်မဲ့ ဝါ၊စိမ်း၊နီ game, အားသုံးရတဲ့ လွန်ဆွဲကစားနည်း၊ ဥာဏ်ကိုလွှာပြီး သုံးမှသာ နိုင်နိုင်မဲ့ကစားနည်း စတဲ့ game တွေကို ဘယ် idol တွေက နိုင်အောင်ကစားနိုင်မလည်းဆိုတာ kpop ပရိသတ်တွေက ချက်ကျလက်ကျနဲ့ သူတို့ idol တွေရဲ့ အရည်အချင်းကို ထုတ်ကြွားနေကြပါတယ်။ သူတို့ ညွှန်းနေကြတဲ့ idol (10) ယောက်ကို ခုလို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
SEVENTEEN အဖွဲ့ဝင် Vernon ကတော့ “Red Light, Green Light” ကစားနည်းဆို လုံးဝ နိုင်အောင်ကစားနိုင်မဲ့သူပါ။ သူ့အဖွဲ့ထဲမှာဆို တခြား member တွေက လှုပ်ရွနေပေမဲ့ Vernon ကတော့ မလှုပ်မယှက်နဲ့ အရမ်းတည်ငြိမ်နေတာကို တွေ့ရမှာပါ။
နောက်ထပ် seventeen အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူ Jeonghan ဟာလည်း ဘယ် game ကိုမဆိုနိုင်ဖို့ ဘယ်လိုလှည့်စားရမယ်ဆိုတာ သိတဲ့သူပါ။
ဒါကြောင့် Squid game ထဲက ဉာဏ်သုံးကစားရတဲ့ game တွေဆို သူ နိုင်မှာ သေချာပေါက်ပါဘဲ။
Red Velvet အဖွဲ့ဝင် Irene ကတော့ တကယ့် Genius လေးပါ။ အားသုံးပြီး အရမ်းမကြိုးစားဘဲနဲ့ problem တိုင်းကို ဦးနှောက်သုံးပြီး smart ကျကျ ဖြေရှင်းတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Irene သာ Squid game ထဲဝင်ကစားရင် winner ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ITZY အဖွဲ့ဝင် Chaeryeong က သူမနိုင်ဖို့ဆို သူမရဲ့ ပြိုင်ဘက်ကိုလုံးဝမညှာတဲ့သူပါ။ ဒါကြောင့် အသည်းမာတဲ့သူတွေသာ နိုင်နိုင်မဲ့ Squid game ထဲက ကစားနည်းတွေကို Chaeryeong အသာလေးကစားနိုင်မှာပါ။
5. Chaeyeon (former IZ*ONE)
IZ*ONE အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း Chaeyeon ကတော့ K-Pop Star 3, SIXTEEN, Produce 48, and Street Woman Fighter အစရှိတဲ့ survival show4ခုတောင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ဖူးပါတယ်။ Squid game သာ ဝင်ကစားဖြစ်ရင် သူမဘဝရဲ့ ငါးကြိမ်မြောက် စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်လာမှာမို့ နိုင်အောင်ကစားမှာ မြင်ယောင်ပါတယ်။
SHINee အဖွဲ့ဝင် Minho ကတော့ ယှဉ်ပြိုင်လိုစိတ်ပြင်းထန်သူဖြစ်ပြီး သူ မတတ်ကျွမ်းတဲ့ အရာဆိုတာ မရှိသလောက်ပါဘဲ။ သူ ကစားဖူးတဲ့ game တွေကို ကြည့်လိုက်ရင် အမြဲနိုင်အောင် ကစားနိုင်တဲ့သူဆိုတာတွေ့ရမှာပါ။ ဒါကြောင့် squid game ဆိုလည်း သူ နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
OH MY GIRL အဖွဲ့ဝင် Hyojung နဲ့ ပြိုင်ဆော့တဲ့သူတွေဟာ သူမကို ကြည့်တာနဲ့တင် အရှုံးပေးလိုက်ကြတဲ့သူမျိုးတွေပါ။ ဒါကြောင့် Hyojung ဟာ ပြိုင်ဘက်ကို ဘယ်လို စိတ်ကလိရမလည်းဆိုတာ သိတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက် Squid game ကို နိုင်အောင် ဆော့နိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။
8. Saerom (fromis_9)
လွန်ဆွဲပြိုင်ပွဲဆော့ရင် fromis_9 အဖွဲ့ဝင် Saerom နဲ့ ဘယ်သူမှပြိုင်ဘက်ဖြစ်ချင်ကြမယ်မထင်ပါဖူး။ လွန်ဆွဲ game ကို ခဏလေးနဲ့ အနိုင်ပိုင်းလိုက်မဲ့သူပါ။
9. Jessica (former Girls’ Generation)
တခါက Girls Generation member တွေရှေ့ကို တကယ် ကင်းမွန်အကြီးစားကြီး ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ အကုန်လုံးကြောက်လို့ ထွက်ပြေးပေမဲ့ Jessica ကတော့ ကင်းမွန်ကောင်ကို ပြေးကန်ပြီး ချခဲ့ပါတယ်။ မကြောက်တတ်တဲ့ Jessica အဖို့ squid game က လွယ်ကူမယ်ထင်ပါတယ်။
10. Hyemi (9Muses)
9muses အဖွဲ့ဝင် Hyemi ဟာလည်း အဖွဲ့ဝင် ဘယ်လောက်ပြောင်းလဲလဲ အဖွဲ့သက်တမ်းကိုးနှစ်မှာ နောက်ဆုံးအထိ ရှိနေသူဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ Heymi ဟာ Squid game ရဲ့ final အဆင့်ထိ တောင့်ခံနိုင်မှာ သေချာပါတယ်။
Next Collab အလုပ်ချင်ဆုံး idol တစ်ယောက်ကို ရွေးချယ်ပေးခဲ့ဖူးသူလေး TWICE's Tzuyu »
Previous « ၂၀၂၁ နှစ်ကုန်နဲ့ ၂၀၂၂ နှစ်စမှာ Netflix က​နေ ရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်ပြသသွားမယ့် ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲ (၆) ခု
“Strawberry Moon” ကို နားထောင်ရင်း ခံစားချက်တွေ ကွဲပြားနိုင်ကြောင်း ပြောခဲ့တဲ့ IU
အမိုက်စားသီချင်း concept အဆန်း​အပြားတွေနဲ့ ပရိသတ်​ရှေ့ကို မကြာခင် ပြန်လာ​တော့မယ့် aespa